Veracruz, Tanànan’ny Loza Rehetra Ho An’ireo Meksikàna Mpanao Gazety : 18 No Maty Hatramin’ny 2000 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2016 4:08 GMT
Anabel Flores, mpanao gazety. Sary miely any anaty tambajotra sosialy.
Vaovao ratsy ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra ao Veracruz, any atsinanan'i Meksika, taorian'ny fanjavonan'ilay mpanao gazety, Anabel Flores Salazar izay, araka ny lazain'ireo loharano isankarazany, dia nalain'ny andiany ira miam-piadiana tamin'ny 8 Febroary 2016 teo. Nanamafy ny fahafatesan’ilay mpanao gazety ny kaomisionam-panjakàna momba ny fiahiana sy ny fiarovana ny mpanao gazety (CEAPP) ny ampitson'io, toarian'ny nahitàna ny vatana mangatsiakany tany amin'ny fanjkàna mifanila aminy, Puebla.
Araka ny bilaogy “Periodismo en las Américas” [Fanaovana Gazety Any Amerika], “tamin'ireo famonoana 7 tamin'ny 2015 nanjo ny mpanao gazety tao amin'ny firenena, telo no nitranga tao amin'io fanjakàna io. Ny Jolay 2015, no tsipihan'ny fikambanana “Article 19″ fa hatramin'ny 2000, 18 ireo mpanao gazety nisy namono tao amin'ny fanjakàn'i Veracruz, isan'ireny ireo 12 nandritra izao fotoana itondràn'ny governora ankehitriny, Javier Duarte, izao“.
Ny tranonkala Aristegui Noticias no voalohany tamin'ireo nilaza ny zavamisy :
Hita tany amin'ny làlan'i Cuacnopalan-Oaxaca any amin'ny fanjakàn'i Puebla ny vatana mangatsiakan'i Anabel Flores Salazar, mpanao gazety nanjavona tao Veracruz ny marainan'ny Alatsinainy 8 Feb,tany amin'ny 15 km teo ho eo miala ny fanjakàna iasàny.
Nanamafy ny maha-azy ilay vatana ny mpiasa iray ao amin'ny lehiben'ny fampanoavana ao amin'ny fanjakàn'i Puebla, tao amin'ny gazetiboky Proceso : “Azo antoka. Indrisy fa dia ilay mpanao gazety nanjavona tamin'ny Alatsinainy maraina io, efa misy andiana fiara tonga eto Puebla”.
Araka ny tranonkala Sopitas, nofaritany ho toy izao manaraka izao ny fanadihadiana, tao Veracruz :
Nokilasian'ny Fampanoavana ao Veracruz ho “fanjavonana” ilay fakàna an-keriny. Mandritra izany fotoana izany, ny mpampanoa lalàna, Luis Ángel Bravo Contreras, nanome baiko ny hanetsehana avy hatrany ireo dingana manokana momba ny Rafitra Federaly Fiarovana ireo Mpiaro Zon'Olombelona sy ny Mpanao Gazety.
Ao Meksika, ny fomba fiteny hoe “fakàna an-keriny” [levantón amin'ny teny Espaniola] dia ampiasaina rehefa misy olona sakànan'ireo andian-jiolahy, na ireo andian'olona mirongo fiadiana mandray anjara amin'ny fifandonana anatiny iainan'ny firenena ankehitriny, amin'ny fomba tsy ara-dalàna tsy hànana ny fahalalahany.
Nanangona fijoroana vavolombelona ny gazety “La Jornada”, izay nilaza fa ireo olona naka an-keriny an'i Anabel Flores, misahana manokana ireo fanadihadiana heloka bevava, “dia nanana endrika miaramila ary toa taminà fiaraben'ny tafika no nandehanany.
Ao amin'ny Twitter, lmanao izao fanehoankevitra manaraka izao i Benito Taibo :
Anabel Flores. mpanao gazety tao Veracruz nisy namono. Aza adinointsika ny anarany.
Naneho ny fomba fijeriny momba ny famonoana ilay mpanao gazety i Claudia Pérez Sosa :
voamarina ny famonoana tsy azo ekena sy feno habibiana an'i Anabel Flores… #AmpyIzay #AtsaharoNyHerisetra
Lasa tena toerana mamoa-doza ho an'ny asa fanaovana gazety i Veracruz tato anatin'ny taona vitsivitsy farany. Raha tsy hitanisa ohatra afa-tsy ny raharaha Gregorio Jiménez de la Cruz izay, roa taona lasa izao, nisy nanindrona antsy talohan'ny nandevenana azy an-tsokosoko tany anaty fasana itambaram-be mameno ny firenena. Tsy voafetra ny loza mitatao amin'ìireo mpanao gazety ao Veracruz – indrisy– satria tamin'ny 2015, notondroin'ny “Reporters Sans Frontières” i Veracruz ho ny firenena tena mpamono mpanao gazety betsaka indrindra any amin'ny ilabolantany andrefana.
Ao anatin'ny Fanomezana Laharana Erantany Momba ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety 2015, toy iza no nolazain'io fikambanana io momba ny toedraharaha mampalahelo ao Meksika :
Mitombo ao anatinà tontolon'ny tsimatimanota tanteraka ny famonoana, fakàna an-keriny ary fandrahonana, miteraka tahotra st fanivanantena. Ny fifandonana eo amin'ireo manampahefana ara-pitantanana sy ara-politika sasany ary ny heloka bevavanasiam-panomanana dia manelingelina ny fitantanana mangarahara sy ny fitsaràna amin'ny dingana rehetra ao amin'ny firenena. Tsy mahomby ilay Rafitra fiarovana ireo mpiaro zon'olombelona sy ny mpanao gazety, tsy anànany ny hafaingànana ilaina mba hamaliana ireo filàn'ny mpanao gazety tandindonin-doza.
Tamin'ny taona lasa, i Rubén Espinosa, mpakasary sy mpanangona vaovao nandositra an'i Veracruz taorian'ny nilazany fa naharaisany fandrahonana avy amin'ny Governora Gouverneur Javier Duarte, dia nampijaliana sy novonoina tany Meksiko, tao anatinà heloka bevava feno habibiana tsy mbola nahitàna mangirana hatramin'izao.
Javier Duarte, nivoaka avy amin'ny laharan'ny Antoko ofisialy Révolutionnaire Institutionnel (PRI) , dia manana tantara iray ifandroritany amin'ny gazety ao an-toerana noho ireo zavamisy ireo sy ny hafa koa. Efa nasehony rahateo koa ny faniriany hanakantsakana ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny aterineto, tamin'ny alàlan'ilay lalàna antsoina hoe “Ley Duarte” [Lalàna Duarte], izany ikatsahany ny hamadika ho helokabevava ny famoahana honohono ety anaty tambajotra sosialy. Avy eo ny Fahefam-Pitsaràna nambara io lalàna io ho tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana.
Ilay ramatoa mpanoratra fantadaza, Guadalupe Loaeza, niantso ilay mpitondra ao amin'ny faritra :
Matory tsara ve izao ianao Andriamatoa Governoran'i Veracruz?
M. Duarte, etsy andaniny, tsy milaza ny heviny taorian'io ampahanà herisetra vaovao natao tamin'ny mpanao gazety io.
11 ora izayAfrika Mainty